Maitiro Ekutora Crunchyroll Mazuva makumi matatu Yemahara Muedzo? - Varaidzo
Maitiro Eku Tora Crunchyroll Yemahara Muedzo?
Iwe uchiri kufunga kuti ungaitore sei iyo Crunchyroll yemahara kuyedzwa?Zvakanaka, isu tiri pano kuzobatsira. Iyi posvo inokutungamira mumatanho ese ekuti utore nyore Crunchyroll yemahara kuyedzwa pasina kunetseka.Kana iwe wagadzirira kuwana yako yemahara Crunchyroll kutongwa, wobva watora bhakiti remapopcorn uye mubhedha kune binge-wachi anime yako yaunofarira.
Crunchyroll - Rufupi Ruzivo
Crunchyroll ane iyochikuru muunganidzwa weanime iyo yaanofanira kupa. Kubva kuNaruto kusvika Kufa Cherechedzo, yega anime iwe yaunogona kufunga nezvayo ichave iripo muraibhurari yavo. Zvingave zvakanaka kana iwe ukafunga kutarisa anime. Iyo inyika nyowani nyowani yevaraidzo isina kuwanikwa. Huwandu hwakazara hwemazita parizvino i1000+. Crunchyroll yakasununguka zvachose nezviziviso, asi unogona kubhadhara $ 7.99 / mwedzikusarudza kubva kushambadziro uye binge-tarisa yako yaunofarira anime mune Yakazara HD mhando. Kuwana iyo Crunchyroll Premium account ingave imwe yesarudzo dzakanakisa dzaungaite kana yako yekunyepedzera kufemerwa hunhu ndiGoku naNaruto.
Kutsvaga Mamwe Anime Sites? Tarisa yedu 10 Best KissAnime.ru Dzimwe nzira chinyorwa.
Nhanho nedanho Gwaro reKuda Crunchyroll Yemahara Trial
Kutora Crunchyroll yemahara kuyedzwa ibasa risingakendengi kana iwe ukatevera matanho aya nokungwarira pamwe nesu. Takatsanangura nhanho imwe neimwe zvakadzama kuitira kuti usarasikirwa nechinhu chero chipi zvacho. Heano matanho akareruka ekuti ungatsvaga sei Crunchyroll yemahara kuyedzwa.
Shanyira iyo yepamutemo peji rewebhu reCrunchyroll nekudzvanya pano .
Mushure mekumhara pane peji reimba reCrunchyroll iwe unofanirwa kushanyira iyo pricing plan peji. Uye ipapo unofanirwa kusarudza chirongwa icho chaunoda kutanga yemahara muedzo uye wobva wadzvanya pane 'Kutanga 14-Mazuva Mahara Ekuyedza' bhatani.
Iye zvino unofanirwa kugadzira yako Crunchyroll account, kana iwe uchinge wagadzira yako Crunchyroll account iwe unofanirwa kuisa iyo yekubhadhara ruzivo.
Paunenge iwe wasarudza, iwe unozotorwa kuenda kune yekubhadhara peji kuti uzadze yako yekubhadhara ruzivo sezita rako, yekubhadharisa kero. Crunchyroll ine sarudzo mbiri dzekubhadhara, dzinoti Kiredhiti kadhi uye PayPal. Unogona kusarudza chero munhu zvinoenderana nezvaunoda.
Paunenge wapedza kuisa yako ruzivo, tinya pane 'Kutanga Mahara Kuyedza' tebhu pazasi kuti utange yako Crunchyroll yemahara kuyedzwa.
Iwe unogona ikozvino kushandisa zvakasununguka kutongwa kweCrunchyroll pasina chero kurambidzwa, uye haufanire kunetseka nezvemari iri kubvisirwa pamberi pe14-mazuva. Asi iwe unofanirwa kurangarira kukanzura chirongwa chekunyorera zuva risati ratarwa, kana zvisina kudaro waizobhadhariswa $ 7.99.
Ongorora:Chirongwa chega chega cheCrunchyroll chinopa muedzo wemazuva gumi nemana wakasununguka kuitira kuti iwe ugone kusarudza chero runyorwa maererano nesarudzo yako. Tinokurudzira kuti usarudze chirongwa chepamwedzi chinodhura $ 7.99 pamwedzi nekuti chinangwa chedu chete kuwana Crunchyroll yemahara kuyedzwa.
Matanho Ekukanzura Crunchyroll Yemahara Muedzo Kuti Uwane Iyo Kudzoserwa:
Kuti ubvise nhengo yako yeCrunchyroll, unogona kutevedzera nhanho idzi:
Pinda muakaundi yako yeCrunchyroll nekudzvanya pano .
Zvino, pakona yekurudyi yekona yako, iwe unowana iyo 'Mbiri' tab; tinya pairi uye enda ku 'Setting.'
Paunenge iwe uri mukugadzika, tinya pane 'Premium Nhengo Yemamiriro' tab, iyo ingave iri kurudyi kwescreen yako. Dzvanya pairi kuti upinde muPrimiyamu Yenhengo account account.
Paunenge iwe uri muPrimiyamu Yenhengo Yenhengo, iwe unowana 'Kanzura nekunyorera' bhatani, iro rinogumisa yako Premium Nhengo Yenhengo Crunchyroll account.
Saka nenzira iyi, iwe unozokwanisa kuwana yemahara kuyedzwa kweCrunchyroll iyo iwe yaunogona kushandisa kwemazuva gumi nemana-emahara pasina kubhadhara kana dhiza.
Zvakanakira Crunchyroll Premium Akaunti:
Kuwana iyo Crunchyroll premium account kunogona kukupa iwe mabhenefiti mazhinji ausingazodemba kana iwe ukaisa mari pano kana iwe uri anime freak uye iwe ungade zvachose basa.
Kana iwe uine Crunchyroll premium account, iwe unozogona kuwana 1000+ anime mazita muZere HD zviri nyore uye unowana hunhu hunhu hwepfungwa-kuridza animes.
Kuisa pamubhedha wako uye kutarisa ako aunofarira animes anogona kunge ari mamwe emanzwiro makuru, asi kamwe kamwe, shambadziro inobuda uye inokanganisa yako anime chikamu. Ichi chinhu chausingasangane nacho neCrunchyroll Premium. Nekambani yeCrunchyroll Premium, iwe uchaona chero kushambadzira kana kushambadza uye nekuona zvisingamisike zvikamu.
Uine Crunchyroll Premium account, iwe unozogona kutarisa izvo zvichangoburwa uye zvakasarudzika zvakashambadzirwa zvirongwa mukati meawa yekuve paAIR. Izvi zvinokupa iwe wakasarudzika anime yekutarisa zvikamu uye zvinokuchengeta iwe uchitumira nezve zvese.
Mutengo weCrunchyroll & Zvirongwa:
Mutengo unoramba uchikosha chinhu kana uchisarudza chero midhiya sevhisi. Crunchyroll ndeyekutenderera-kwese Anime kutenderera sevhisi , iyo inotsanangurwa kuburikidza nemutengo wayo. Ndiyo yako yekufona kana kubhadhara mashoma mashoma kukoshesa yako madhora kune avo epamusoro-notch vhidhiyo mhando uye kushambadzira-isina basa. Zano ravo remitengo rakarongeka kwazvo zvinoenderana nemasevhisi avanopa. Heano mamwe marongero ayo Crunchyroll anopa:
Fan Plan: Iri zano rinodhura $ 7.99 pamwe nekuwedzera mutero. Pano iwe hapana chaunochengeta nekuti ndiro rakachipa pane chirongwa. Heano mamwe maficha aunowana nehurongwa hweMwedzi: Hapana kushambadzira, Kusingagumi kuwana kuCrunchyroll, Zvikamu zvitsva awa rimwe chete mushure meJapan, Kuwana kune digital digita *, Stream pane imwechete kifaa panguva.
Mega Fan Chirongwa:Iri ndiro chirongwa chakakurumbira, Crunchyroll, icho chinodhura iwe $ 9.99 / mwedzi pamwe nemitero. Iri zano richakupa iwe toni yezvinhu senge Pasina kushambadzira, Kusingagumi kuwana kune raibhurari yeCrunchyroll, Zvikamu zvitsva awa rimwe chete mushure meJapan, Kuwana kune digital digita *, Stream pane mana zvigadzirwa panguva, Offline Kuona.
Mega Fan Yegore Chirongwa: chirongwa ichi chirongwa chegore chinoita $ 79.99 pamwe nemitero. Mune ino hurongwa, iwe unochengetedza kusvika ku33% pane chirongwa chemwedzi. Pane zvakawanda zvakawanda zvezvinhu zvaunowana neiyi chirongwa senge Pasina kushambadzira, Kupinda kusingagumi, Zvikamu zvitsva awa rimwe mushure meJapan, Kuwana kune digital digita *, Stream pane mana madhi panguva imwe, Offline Kuona, 16% kuderedzwa paMwedzi Kuronga (kubhadharisa yega gumi nemaviri-mwedzi).
Zvirongwa zvese izvi zvinouya nemuedzo wemazuva gumi nemana wakasununguka waunogona kusarudza usati wasarudza chero chirongwa. Iwe unogona kutevedzera nhanho dzataurwa pamusoro apa mune ino positi kuti utore Yemahara Crunchyroll kutongwa.
Crunchyroll Inokodzera Chaizvoizvo Here?
Ehe, Crunchyroll yakakosha nekuti iwe unowana akawanda mazita aunogona kutarisa muHD, mamwe akanakisa maanime akaita seDragira Z Z, Rufu Rufu, Naruto, uye vamwe vazhinji varipo paCrunchyroll. Pamwe chete neizvozvo, iwe unozogona kutarisa yakasarudzika anime yezvinyorwa 1 awa gare gare mushure mekunge vatepfenyurwa paterevhizheni. Zvakare, iwe hauzoone chero kushambadzira iwe paunenge uchifambisa chero anime. Saka zvakazara, Crunchyroll chingave chinhu chakanakisa icho chinoitwa neanime freak.
Isu tinovimba kuti mushure mekuverenga kwedu posvo, imi mese makagadzirirwa kuwana yako yemahara Crunchyroll Premium account. Iyi posvo yakafukidza zvese zvinoitiswa kuti uwane muyedzo wakasununguka weakaundi yeCrunchyroll. Kana iwe ukakwanisa kuwana yemahara Crunchyroll Trial, wobva wadonhedza pfungwa dzako nemaonero ako mubhokisi rakajairika pazasi.
Akanakisa Anime paHulu - Iyo Inofanirwa Kutarisa Rondedzero
Hulu vs Sling TV - Ndeipi Yakanyanya?
15 Yakanakisa Yekupedzisira Kucheka Pro Windows Dzimwe nzira (2020)
Yakanakisa Android TV Bhokisi 2020 - Unofanira Kuverenga (Ongororo)
pamusoro gumi emahara emahara emahara mawebhusaiti
tumblr yakachengeteka mamiriro kubva pasina account
inoita chromecast inoshanda ne pc
unogona here kushandura youtube kuita mp3
sei kuyerera desktop kune chromecast
tarisa mafirimu pamhepo mahara uye hapana kusaina kumusoro
yakawanda sei kune account yenetflix